Good Doctor online App - EWhale Myanmar
﻿User သည် လူနာအခြေအနေကို အလွယ်တကူ တင်ပြလို့ရသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဆရာဝန် ၉၀၀၀၀ ကျော်ကို အွန်လိုင်း အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ် ခန့်အပ်ထားပြီး ဆရာဝန်များကို သင့်မေးခွန်းများ ပြန်လည်ဖြေကြားရန် စီစဉ်ထားသည်။ ဆရာဝန်များ၏ဆေးခန်းများကို ချက်ချင်း update ပေးပြီး သင်ကိုးကားခြင်းရစေရန်နှင့် အချည်းနှီးပြေးလွှားနေရခြင်း ရှောင်ရှားရန် သတင်းအချက်အလက်များကို တိတိကျကျ ဖွင့်ပေး၊ ပိတ်ပေးသည်။ ၁.၆ သန်းသော လူနာများက သူတို့၏ ဆေးကုသမှု အတွေ့အကြုံများ ဝေမျှနိုင်ပြီး သင့်တော်သော ဆရာဝန်ကောင်းတစ်ယောက် ကူညီရှာဖွေပေးပါသည်။
﻿﻿၁. အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း - အခမဲ့အွန်လိုင်းမေးခွန်းများ, ကျန်းမာရေး မရေရာမှုများ၊ ဆရာဝန်တွေ့ပြီးနောက် တုံ့ဆိုင်းခြင်းများ ရှိနေပါက ဆရာဝန်ဆီမှ တုံ့ပြန်ချက်များ ပြန်ရနိုင်သည်။
၂. တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း - ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း ရှာဖွေသည့် ကုန်ကျစရိတ် လျော့ချစေရန် ဆရာဝန်များမှ အကြံပေးချက်များကို တိုက်ရိုက်ရယူလိုက်ပါ။
၃. ရက်ချိန်းယူလိုက်ပါ - အခမဲ့ ဆရာဝန်များနှင့် ဘိုကင်ကြိုချိတ်ပြီး တန်းစီစောင့်နေရသည့် အချိန်လျော့ချလိုက်ပါ။
၄. တယ်လီဖုန်းဆေးခန်း - တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ နာမည်ကြီး ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ရေရှည်ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုရယူနိုင်ပြီး ဆရာဝန်များနှင့်လည်း ဖုန်းခေါ်ဆို၍ရသောကြောင့် မကြာခဏအပြင်ထွက်စရာ မလိုတော့ပါ။
Good Doctor သည် ယခုလက်ရှိတွင် ခရီးရောက်သော အပ်ပလီကေးရှင်းဖြစ်ပါသည်။ သမားတော်အင်အားသည် လူနာများကို တိုက်ရိုက် ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေတဲ့ ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏ ကျောရိုးမဏ္ဍိုင် ဖြစ်သောကြောင့် Good Doctor သည် သမားတော်အင်အား မလုံလောက်မှု အဟန့်အတားကို ဖြေရှင်းရန် ကတိပြုထားပါသည်။ လူနာများသည် သတင်းအချက်အလက်ရရန် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ search engines ကို မှီခိုကြသော်လည်း ဆရာဝန်သာလျင် ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ ဆရာဝန်အရေအတွက်နှင့် အရည်အသွေးသည် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ဆုံးဖြတ်ပါသည်။
Good Doctor တွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုအတွေ့အကြုံ ၉ နှစ်ရှိပြီး လက်ထောက်ဆရာဝန်များ ၃၀၀ ကျော်က ဆရာဝန် ၉၀၀၀၀ ကျော်ကို ကူညီပေးနေပါသည်။ သင့်အတွက် ဆေးကုသမှု အခက်အခဲကို ဖြေရှင်းပေးနေသောကြောင့် Good Doctor ကို ကူညီခွင့်ပေးလိုက်ပါ။